KANTAROOLAHA KANTAROOLKA EE BISADAHA LAGA BILAABO BOODADA IYO SHILINTA: FAA'IIDOOYINKA IYO FAA'IIDO DARRADA, XEERARKA CODSIGA IYO QIIMAHA CELCELISKA EE RUUSHKA - GURI, GURI
Badbaadi xayawaankaaga! Kantaroolaha kantaroolka ah ee bisadaha loogu talagalay boodada iyo shilinta
Xayawaanka ma aha farxad weyn oo kaliya qoyska oo dhan, laakiin sidoo kale masuuliyad weyn. Xayawaanka aad jeceshahay way jiran yihiin si la mid ah mulkiilayaashooda.
Dhibaatada ugu wayni waa dhiig-duurjinta dhiigga: injirta iyo boodada. Maanta, warshadaha dawooyinka ayaa bixiya qalab badan oo ka takhalusi kara xayawaanka bada. Mid ka mid ah waa "Kormeeraha".
Faahfaahin macnaheedu waa
"Kormeeraha"waa dareer aan midab lahayn iyada oo aan la saarin qiiq yar oo ah aalkolo Dhibaatooyinka waxaa lagu ridaa weelasha, ugu dambeyntiina waa isku dhafan oo la adeegsanayo dareeraha.Xalka wuxuu ka kooban yahay laba waxyaabo firfircoon oo firfircoon: moxidectin iyo fipronil.
Labadaba waxay yihiin sunta sunta ah waxayna si aan dhib lahayn u tahay caafimaadka bani-aadamka iyo xayawaanka., laakiin dhimasho u ah wakiilada boodada iyo cayayaanka kale ee dabiiciga ah. Fipronil wuxuu faragalin karaa nuugista koloriin.
Nidaamkani wuxuu joojiyaa isu-gudbinta dareen-celinta dareemayaasha, isla mar ahaantaasna xannibaya dhammaan nidaamyada jirka ee boodada, taas oo horseedi doonta dhimashadeeda degdegga ah. Liitada waxaa ku jira 2.5% moxidectin iyo 10% fipronil. Tani waa arrin ku filan in la burburiyo dulin-dhiigga nuugista.
"Kormeeraha"waxaa lagu hormariyaa ujeedada loo marayo xayawaannada guryaha, gaar ahaan bisadaha, laga helo dhiig-sumaysashada dhiigga, waxaa si guul leh loo isticmaalaa noocyada kala duwan ee shillinta, injirta iyo boodada, iyo sidoo kale dhammaan noocyada helminths.
"Kormeeraha" - waa hab waxtar leh marka loo eego daroogooyinka kale ee la midka ah. Waxaa suurtogal ah in ay si buuxda u madax banaanida bakeingka, iyada oo aanad raadsan caawimo takhasusle. Nidaamku wuxuu soconayaa oo keliya dhowr daqiiqo.
Markaad isticmaasho dheecaanka xayawaanka, uma baahnid inaad qubeysid oo aad shanleysatid. Guud ahaan, habka qubeyska ma siinayo bisadaha raaxo qaas ah. Sidaas awgeed dabiiciyan waa dabiiciga ah inaysan jeclayn biyaha. Inkastoo ay jiraan wax ka reeban.
Xalku uma baahna dhaqaale dheeri ah oo lagu iibsado qoryaha boodada. Lacagtaas oo kale, wuxuu si firfircoon uga takhalusay xayawaanka dulin. Intaa waxaa dheer, xidhxidhayaashu waxay halis u yihiin xayawaankaaga. Markaad ku socoto cawska iyo jiqda, iyo sidoo kale geedaha fuulaya, wuxuu si khalad ah u xajin karaa laanta iyo xitaa cirridka.
Marka la barbardhigo daaweynta dadweynaha - kaliya ku celinta cayayaanka oo loo isticmaalo sida wakiilada ka hortagga, dhibcaha si buuxda u dilaan cayayaanka.
Liitada ayaa la doorbidi karaa in lagu buufiyo.
Marka horebuufinta ayaa daciif ah.
Marka labaad, waxay ku qasbanaan doonaan inay xayiraan xayawaanka gebi ahaanba. Waxa uu bilaabi doonaa inuu lickleeyo, iyo tan run ahaantii aan loo baahnayn.
Liquid waa bini'aadamka.. Ma loo baahan yahay maaskaro ama faashad faashad ah. Way ku filan tahay inaad gashato.
Dabcan, khatartu waxay qaadataa dhammaan daawooyinka cayayaanka ee saameeya fayoobaanta xoolaha. Dhibaatooyinka ayaa sidoo kale leh faa'iidooyinkooda, laakiin way yaraayeen.
Dhibaatooyinka kale. Tani marar dhif ah ayay dhacdaa oo keliya haddii jidhka xayawaanka uu yahay mid xasaasi ah.
Daroogadu maaha inay disho dirxiga boodhka ah.. Waa cadahay sababta: dirxiga ayaa si gooni ah u noolaanaya dadka waaweyn. Waxay u dhiman karaan oo keliya haddii ay ku dhacaan timaha cagaarka ah ee la daweeyey. Si looga hortago in tan dhacdo, xakamaynta cayayaanka waa in lagu fuliyaa guriga oo idil, oo fiiro gaar ah u leh meesha uu cagaarka jecel yahay inuu seexdo.
Digniin! Haddii dhowr koofiyadood loola shaqeeyo isku mar, xidhiidhka iyaga u dhaxeeya waa in la tirtiraa, u wareejiyaa qolal kala duwan. Si aad u nuugo daroogada, waxay qaadan doontaa wax ka badan saacad.
"Kormeeraha" waa in lagu daboolaa maqaarka engegsan ee xayawaanka. Waa inaan la dhaawacin. Dhibaatooyinka ka dib marka la jebiyo caarada foornada ayaa lagu tiriyaa meesha xayawaanku uusan gaarin carrabka.
Meeshani way engegtay. Ka hor inta aanad u dhexgalin jaakadaha u dhexeeya garabka garabka, si tartiib ah u riix, iyo dhibcaha waxaa lagu dabaqayaa meelo badan.
Marka aad ka shaqeyneyso bisadaha yar-yar, waxaad daaweyn kartaa hal dhibic..
Marka la samaynayo ka shaqeynta, xayawaanka lama dhaqo afar bilood..
Waa muhiim! Haddii daaweyntu u socoto injirta, tuubooyinka iyo tuubada, wakiilka waxaa la codsadaa hal mar. Si looga hortago in hawsha la soo celiyo waxaa lagu soo celin karaa qiyaas ahaan bil iyo badh.
Tani waxay si gaar ah u tahay runta xagaaga, marka cayayaanka dhiqlaha ay si gaar ah firfircoon yihiin. Haddii aan ka hadlo kaliya boodada, daaweyntu waxay si fiican u shaqaysaa marka la qabto saddexdii biloodba mar.
Caadi ahaan daroogada si wanaagsan ayaa loo dulqaataa. Haddii qiyaasta saxda ah ay sax tahay, ma jiri doonto falcelin xun. Laakiin muuqaalkani si degdeg ah ayuu u baaba'ayaa. Laakiin haddii bisadu ay u nugul tahay xasaasiyad, markaas "Kormeeraha" wuxuu sababi karaa dareen-keeda ku haboon.
Si aad uga takhalusto kan dambe, qalabkana waa la dhaqaa, iyo xayawaanku waxay qaadataa antihistamines.
Laakiin taasi marar dhif ah ayay dhacdaa. Dhacdooyinka dhacdooyinka xun waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
salivation xad-dhaaf ah;
matag iyo lallabbo;
cuncun iyo finan maqaarka ah.
Calaamadahaasi waxay ka baxaan ugu badnaan 2 maalmood. Haddii xaaladda xayawaanka ay si xun u xumaatay, waxaad u baahan tahay inaad si fiican ugu dhaqdo shaamboo oo la xiriir rugta caafimaadka xoolaha.
Waxaa fiican inaad la xiriirto dhakhtarka ka hor daaweynta ka hor.. Khabiirka ayaa qiimeyn doona sifooyinka shakhsiyeed ee xayawaanka iyo siinaya talooyinka saxda ah.
"Kormeeraha" looma isticmaali karo haddii aysan jirin xayawaan daroogo ah.
Daroogada ayaa ka horjoogsaneysa isticmaalka kittens haddii aysan ku soo laaban 7 toddobaad.
"Kormeerte" ma daaweyn karo xayawaan jirran ama dib u soo kabashada cudurka, gaar ahaan haddii aan ka hadleyno cudur kasta oo faafa.
Hooyooyinka uurka leh, naas-nuujinta, iyo sidoo kale xayawaanka rinjiga ah ee ka yar hal kiilo, waa la baari karaa, laakiin tani waa in la sameeyaa oo kaliya iyada oo la kormeerayo xoolaha.
La shaqee dhibcaha
Xalku waa mid ku habboon in la isticmaalo. Dareerka waxaa lagu duubayaa tubbooyinka yaryar. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira sharciyo la shaqeynaya.
farsamaynta laguma samayn karo jikada;
inta lagu jiro nidaamku ma cabbi karo oo cuni karo;
Daaweynta ka dib, gacmaha si fiican ayaa loo dhaqaa saabuun iyo biyo;
3 maalmood, xayawaanka waa in laga ilaaliyaa inta ka hartay guriga, gaar ahaan carruurta. Adigu ma demin kartid;
haddii dareeruhu si khafiif ah u helo maqaarka, waxaa lagu dhaqaa biyo badan.
Dhibcaha lagu keydiyo meel qalalan oo aan la geli karin.. Waxaa laga ilaaliyaa qorraxda tooska ah. Nolosha sheyga iyada oo aan lumin hantidoodu waa qiyaastii saddex sano.
Qiimaha celceliska ee Ruushka
Hal dhuumo oo leh miisaan ah 0.4 ml badeeco daawo ah oo loogu talagalay bisadaha miisaankeedu yahay 4 kg qiyaastii 250-270 rubi. Iibsiga internetka, dhibcaha waxaa laga iibsan karaa qiimo hoose.
"Kormeeraha"sida daawo loogu talagalay xakamaynta boodhka, waxay ahayd mid aad u qadarisay khabiiro, waxay u adeegsadeen xaqiiqda ah in uu helay jawaab celin badan oo ka timi dhakhaatiirta xoolaha iyo kuwa loo yaqaan 'pet lovers', qiimaha la awoodi karo waxay ka dhigtay mid ka mid ah daawooyinka ugu caansan ee xakamaynta cayayaanka gudaha.